Mawduuc la mid ah Gaarsiinta Kala Duwan | Martech Zone
Monday, July 27, 2009 Axad, Oktoobar 4, 2015 Ball Lorraine
Dadka badankood waxay si dabiici ah u beddelaan qaab isgaarsiintooda markay la hadlayaan cunug, saaxiib dhow, ama qof aan ku hadlin Ingiriisiga sidii afkiisa hooyo. Sababta Sababtoo ah koox waliba waxay leedahay qaab tixraac, khibrad, iyo xidhiidh ka duwan kan hadlaya kaas oo saamayn ku yeelan doona awooddooda tarjumaadda farriinta.
Isla sidaas ayaa ku jirta wada xiriirkaaga qoran ama qoraalka nuqul. Intii aan u doodayo milkiileyaasha ganacsiyada inay dib u isticmaalaan waxyaabaha ku jira dhammaan meeraha, war-saxaafadeedyada, waraaqaha wararka, qoraalada baloogyada iyo warbaahinta bulshada, waxaa muhiim ah in la hagaajiyo gaarsiinta barta gaarka ah.
Tusaale ahaan: Qoritaanka a war-saxaafadeed ku dhawaaqida kiro cusub ayaa laga yaabaa inay ku bilaabato:
Adeegyada Maaliyadeed ee Marietta, oo ah xarun xisaabeed ku saleysan Indianapolis, qorsheynta canshuuraha, iyo la-talinta ganacsiga yaryar, ayaa maanta lagu dhawaaqay Jeffrey D. Hall; CPA waxay ururkooda ugu biirtay lataliye xagga canshuuraha iyo ganacsiga. Jeffrey wuxuu keensanayaa in kabadan toban sano xisaabinta, xisaabinta iyo diyaarinta canshuuraha iyo qibrada qorshaynta doorkan cusub.
Isla warka la soo dhigay shirkadda blog waa inuu noqdaa mid aan rasmi ahayn, oo wada hadal ku jira. Nuqulku wuxuu u ekaan karaa sidan:
Waxaan ku faraxsanahay inaan ku dhawaaqno in Jeffrey Hall uu ku soo biiray Adeegyada Maaliyadeed ee Marietta, isagoo ah la-taliye xagga canshuuraha iyo ganacsiga. Waan ognahay inay macaamiisheennu ka faa'iideysan doonaan Jeffrey tobankii sano ee xisaabinta, xisaabinta iyo diyaarinta canshuuraha iyo khibradda qorsheynta.
Iyo in warbaahinta bulshada qoraalka nuqulku waa inuu ahaadaa mid aan caadi ahayn. Tweet wuxuu noqon karaa:
@jeffhall ayaa hada xubin ka ah kooxda @marietta. Ku dar isaga liiska taxanahaaga, una dir su'aalahaaga cashuuraha jidkiisa! (Ha u raadin @jeffhall barta Twitter-ka wali, wali waxaan la shaqeynayaa macmiilkaas si aan ugu dadajiyo, kani waa tusaale sida loo isticmaali karo warbaahinta.)
Marka marka xigta ee aad wax u qorto mid dhexdhexaad ah, ka fikir sida wax looga beddeli karo, loona isticmaali karo meelaha kale. Ku dhisida taatikadaan jadwalkaaga caadiga ah waxay fududeyn doontaa habka loo dhisayo muuqaalkaaga khadka iyadoo loo marayo adeegsiga caqliga leh ee waxyaabaha ku habboon.
Jul 27, 2009 markay tahay 5:29 PM
Waad saxantahay Lorraine. In kasta oo nuxurka asal ahaan wax isku mid ah sheegaya, gaarsiinta waa la beddeli doonaa. Taasi waa mid ka mid ah astaamaha nuqul qoraaga wanaagsan - waxay u beddeli karaan qaabka xaaladda loo baahan yahay iyo dhagaystayaasha. Tani runti waa awood aan wali ku shaqeynayo.
Jul 27, 2009 markay tahay 3:10 PM
Boostada weyn, Lorraine. Shaqaalahaaga Wareega si aad ah ayey u fahmayaan markay tahay ka faa'iideysiga mid kasta oo dhexdhexaad ah iyo u hagaajinta farriinta dhexdhexaadinta si loo xoojiyo xooggooda loona yareeyo daciifnimadooda!